Olana mafana ara-tsosialy | TIGERNU
TIGERNU dia nanomboka nifanesy nifandimby tato ho ato, ary nampihatra tamim-pahamatorana ireo fepetra takiana amin'ny sampan-draharahan'ny Fisorohana Virus any Guangzhou, ary nanatanteraka ny fizahana ny mari-pana, ny fanadiovana ary ny famonoana otrikaretina ary ny fisoratana anarana ho an'ireo mpiasa nohavaozina.
Ny bokikely fisorohana Coronavirus dia navoaka tao amin'ny faritry ny orinasa, milaza fa ny mpiasa miasa dia tokony hanamafy ny fisorohana sy ny fanaraha-maso, hahatakatra bebe kokoa ny fahalalana ara-pahasalamana, hanatsara ny fahatsiarovan-tena momba ny fahasalamam-bahoaka, ary mangataka izahay ny mpiasa rehetra mba tsy hisaron-tava.
Tokony hizotra tsara ny fisorohana ny viriosy ary tsy afaka mampiato ny fiasan'ny orinasa isika. Ny mpiasa rehetra ao amin'ny TIGERNU dia tsy nanintona ny sainy tamin'ity viriosy ity vetivety. Ny fisorohana virus corona dia adidy sy andraikitra iraisan'ny fiaraha-monina iray manontolo, toy izany koa ny asan'ny orinasa. Andraikitry ny firenena, ny fiarahamonina, ny fianakaviana, ny orinasa ary ny mpanjifa izany.
Hatramin'ny faran'ny taona lasa dia misy mpiasa sasany izay mbola tsy nody tany amin'ny fialantsasatry ny taom-baovao Sinoa, indrindra ny sampana mpamokatra, izay mitarika ny orinasa ary tompon'andraikitra amin'ny lojika sy ny fandefasana. Nanomboka tamin'ny fiparitahan'ny coronavirus ka hatramin'ny famerenana ny famokarana, dia namaha tamin'ny fomba mandaitra ireo olana isan-karazany avy amin'ny departemantan'ny varotra sy ny marketing.
Farany, izahay dia maniry ny hanome ny fanajana indrindra ny mpiasa sy ny mpanjifa rehetra izay miahy sy manohana ny fampandrosoana ny TIGERNU. Salama tsara isika rehetra. Misaotra anao noho ny fiahiahianao. Amin'ny taona vaovao, hiaraka isika ary handresy ny coronavirus.
Fotoana fandefasana: Mar-19-2020